Chitsuwa cheItaly cheVulcano chakabviswa pamusoro pegasi rinouraya rine muchetura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Chitsuwa cheItaly cheVulcano chakabviswa pamusoro pegasi rinouraya rine muchetura
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Meya weVulcano, Marco Giorgianni, akarambidzawo vashanyi vekunze kubva pachitsuwa ichi senzira yekuchengetedza.
Pasi pemutemo mutsva, wakatanga kushanda nhasi, vagari ve ItariChitsuwa cheVulcano vakarairwa kuti vabude mudzimba dzavo husiku hwese kwemazuva makumi matatu anotevera, nekuda kwekutyisidzira kunokonzerwa nekuputika kwegomo.
Vagari vanofanirwa kubva mudzimba dzavo pakati pa11pm na6am nguva dzemuno nekuda kwekunetsekana kwegasi rinogona kuuraya rinoburitswa kubva kuLa Fossa volcano crater.
Sekureva kwaGiorgianni, matanho akasimba aidiwa sezvo "kusaziva kwekurara kwaisatendera vagari kuti vaone njodzi."
Vulcano, iyo inoumba chikamu cheAeolian archipelago, icharambidzawo chero kushanya kwemwedzi unotevera. Matanho aya anouya mwedzi mushure mekunge bazi rinodzivirira veruzhinji ravandudza danho rechenjedzo kuti "rakakosha," uye mazuva mashoma mushure meItaly National Institute for Geophysics and Volcanology yayambira nezve "zvisingaite" mwero wecarbon dioxide pagomba rinoputika.
Vakuru pachitsuwa vakazivisawo mamiriro edambudziko pamwe nekuisa matanho ekudzivirira kana paine kuwedzera kwechiitiko chekuputika kwemakomo kana magasi anoburitswa mumhepo.
Magasi akaburitswa negomo rinoputika anoreva kuti mwero weokisijeni pachitsuwa unogona kudonha, zvichikonzera kutadza kufema kunouraya. Carbon dioxide mazinga anonzi akakwira kubva pachiyero chematani makumi masere kusvika kumatani mazana mana nemakumi masere, sekureva kwevanoongorora kuputika kwemakomo. ANSA.
Chitsuwa ichi - zita racho musanganiswa we 'volcano' uye 'Vulcan', mwari weRoma wemoto - chakasangana nekuputika kakawanda munhoroondo, nguva pfupi yadarika kubva 1888 kusvika 1890.